Akụkọ - Nchedo gburugburu ebe obibi na nkwado ya - omume nke akwa okike n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị nke 2022
Agbanyeghi na okpueze ohuru ohuru a ebutela ọgba aghara ndi mmadu, echiche nke nchedo gburugburu ebe obibi ka bu ihe ndi ahia na ndi ahia. Nghọta ndị mmadụ nwere banyere etu gburugburu ụwa si emetụta ahụike mmadụ na-esiwanyewanye ike, na nchekwa gburugburu ebe obibi bụzị isi ihe ndị ọha na eze tụlere. Maka ụlọ ọrụ akwa akwa, otu esi ewepụta azịza ga-adigide site na eriri gaa ejiji, jiri eriri eke iji belata mmetụta na gburugburu ebe obibi, ma chọpụta usoro ntinyegharị n'ụzọ zuru ezu site na teknụzụ dijitalụ. Ga-abụ usoro mmepe kachasị nke ụlọ ọrụ akwa n'ọdịnihu. Ya mere, isiokwu a ga-elekwasị anya na eriri owu na-acha akwụkwọ ndụ, owu na-acha odo odo, ọrụ ọkụkụ na-agbanwe agbanwe, dyeing osisi, ọrụ aka ngwa ngwa, imegharị ihe na nchedo gburugburu ebe obibi iji mepụta ndụ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma. Ọ ga-abụkwa mmepe kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ akwa akwa n'ime afọ ole na ole sochirinụ. Na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala.
Organic owu eriri
Key echiche: Organic owu bụ ụdị nke dị ọcha eke na mmetọ-free owu. A na-ejikarị fatịlaịza na ahịhịa eme ihe, ijikwa ahụhụ na ọrịa na nchịkwa okike. A naghị ekwe ka ngwaahịa kemịkal, na enweghị mmetọ achọrọ na mmepụta na usoro ntụgharị. ; O nwere njirimara ecology, green na nchedo gburugburu. Otu nnyocha gosiri na ịkọ ahịhịa na-ebelata mmetụta nke owu na gburugburu ebe obibi, si otú a na-enyere aka melite ụdị dị iche iche nke anụ ahụ na ahụike ala, ma belata kemịkal na-egbu egbu. Dị ndị dị ka H&M na Uniqlo etinyela aka na atụmatụ owu iji mezuo mkpa ndị na-azụ ahịa “ebumnuche nke ime ka owu dịrị.” Yabụ, ahịhịa ndị na-emepụta ahịhịa abanyela na njikọta akwa textile.
Usoro & Eriri: Organic owu eriri toro na kpere eke ụzọ. Nkpuru ogwu gha aghaghi ino na ebe ikuku, mmiri na ala adighi emeru. Uwe a kpara site na owu organic nwere ihe na-enwu gbaa, mmetụta aka dị nro na nnagide dị mma; ọ nwere ihe pụrụ iche antibacterial na deodorant Njirimara; ọ na-ebelata mgbaàmà nfụkasị ma na-enye aka maka nlekọta anụ ahụ. A na-eji ya na oge okpomọkụ ma na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta dị jụụ ma nwee ahụ iru ala.
Ngwa aro: Organic owu eriri kwesịrị ekwesị maka eke akwa dị ka owu, linen, silk, wdg, na ike na-etinye na iche iche idaha chọrọ. Okwesiri maka mmepe nke ụdị ọ bụla dị mma, akwa uwe nkeonwe.
Eke ihe owu
Isi okwu: Ruo ogologo oge, ndị mmadụ maara naanị na owu dị ọcha. N'ezie, akwa nwere agba dịworị na okike. Agba nke owu a bụ njirimara nke ndu, nke mkpụrụ ndụ ihe nketa na-achịkwa ma nwee ike ịfefe ya n'ọgbọ ọzọ. Egwuregwu mara mma bụ ụdị akwa ọhụrụ nke na-eji teknụzụ bioengineering nke oge a eme ihe iji mepụta ụdị akwa ọhụrụ nke nwere agba okike mgbe owu na-agbụpụ. Acha owu na-acha na-eme ka ahụ ike mmadụ; Mbelata usoro obibi akwụkwọ na agba ya na usoro akwa na-ebute okwu "mgbanwe ndụ akwụkwọ ndụ" nke mmadụ wepụtara, na-ebelata mmetọ gburugburu ebe obibi, na-enyere mba ahụ aka ịnọgide na-enwe ọnọdụ ya dị ka isi na-ebupụ textiles, ma na-emebi mba ụwa "ahia ndụ akwụkwọ ndụ ”. Ihe mgbochi ”.
Usoro & Fiber: E jiri ya tụnyere owu nkịtị, ọ na-eguzogide ụkọ mmiri ozuzo, ahụhụ na-eguzogide ọgwụ, oriri mmiri na ntinye ndị ọrụ ugbo dị ala. Eke eriri na-acha uhie uhie dị mkpụmkpụ ma na-emebi emebi karịa akwa ndị ọzọ. Varietiesdị agba dị oke oke, ụfọdụ dị obere, na mkpụrụ dị ala. Eke na-acha odo odo bụ enweghị mmetọ, na-echekwa ike na-adịghị egbu egbu. Agba nke owu na-enye ihe mkpuchi anụ ahụ, ọbara ọbara, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na aja aja. Ọ naghị aju oyi ma nwekwaa ụfọdụ nguzogide anyanwụ.
Ngwa aro: eke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ eriri, kwesịrị ekwesị maka mmepe nke anụ ahụ na-eme ka anụ ahụ, na gburugburu ebe obibi, na-abụghị dyeing uwe akwa ngwaahịa. Owuwe ihe ubi & Mill, ụdị nke a na-eji oji na-acha akwụkwọ ndụ etolitela, nụchaa ma dụọ ya na United States, ụdị ihe owu anaghị adịkwa ụkọ.
Ugbo ohuru nke ugbo ugbo
Isi echiche: Ugbo ahihia na-ezo aka n'inwe nkpuru osisi na akwukwo nri n'enyeghi kemikal, ya na sayensi dika ihe omuma na ndu ndu dika echiche. Omume a nwere ike weghachite ala, chebe anụmanụ, melite mmiri ma nwekwuo ụdị dị iche iche. A na-ahụta ihe ndị a na-akọpụta Organic na mba niile ngwaahịa dị elu, na-emetọghị emetọ na gburugburu ebe obibi. Yabụ, etolitere ọrụ ubi iji meziwanye asọmpi nke ngwaahịa ọrụ ala m na mba ụwa, ịbawanye ọrụ ime obodo, ego ndị ọrụ ugbo, ma melite ọrụ ugbo.
Crafts & Fibers: Patagonia, onye ọsụ ụzọ na-emegharị emegharị, site na mmemme ROC ya, na-eme eriri na nkwekọ na nchịkọta nri, ma na-akwado ihe karịrị ugbo 150 na India iji nye akwa akwa maka uwe. Mepụta usoro texti na-agbanwe agbanwe dabere na njikwa ala.
Ntuziaka Ngwa: Oshadi na-etinye atumatu "Site na Mkpụrụ Mkpụrụ na Sekwa ​​Akwa", nke a na-achọ iwughachi iji bulie ịkọ ahịhịa na ahịhịa sitere n'okike. Uzo mbu nke ejiji mmekorita ga adi na ntaneti na offline. Mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nke akara Wrangler bụ usoro izizi iji jikọta ime obodo na ngwaahịa a. A na-eji aha ugbo na akara akara jeans na T-shirts.
Isi echiche: Dyeing osisi na-ezo aka na usoro nke iji osisi dị iche iche nwere pigments nke na-eto eto na okike iji wepụta ihe na-eme ka agba agba. Isi mmalite nke agba osisi bụ turmeric, madder, rose, nettle, eucalyptus, na odo odo.
Usoro & Fiber: A na - ahụkarị pigments nke ihe eji agba osisi na osisi ma nụchaa ya site na ọrụ teknụzụ, na ihe ndị nwere agba nwere ike ịdịgide adịgide ma ghara ịla n'iyi. Iji dyeing nke ihe ọkụkụ nwere ike ọ bụghị naanị belata nsogbu nke agba na ahụ mmadụ wee jiri ihe ndị sitere n'okike na-eme ihe n'ụzọ zuru oke, kamakwa belata nsị nke mmiri mmiri na-acha ọcha, nke na-enyere aka belata ibu nke ọgwụgwọ nsị na ichebe gburugburu ebe obibi. .
Ngwa ntinye: dyeing osisi nwere ezigbo mmekọrita maka eriri anụ ọhịa. Dị dị iche iche zuru ezu na silk, agba na-enwu gbaa, na ngwa ngwa dị mma. Nke abuo, eriri owu, eriri ajị, eriri bamboo na modal dị mma; ọ dịkwa irè maka ụfọdụ emegharị emegharị. Kwesịrị ekwesị maka uwe na akwa nwa na ngwa ya, uwe ime, uwe obibi, uwe egwuregwu, ngwaahịa ngwaahịa ụlọ, wdg.
Aka ngwa ngwa
Isi Echiche: Na ejighị n'aka nke ọnọdụ akụ na ụba mba ụwa, ahịa na-ere ahịa nke abụọ na ọrụ aka Mee N'onwe Gị na-aga n'ihu, na ntinye nke echiche efu efu nke na-egosipụta mmụọ nke nnwere onwe ka a mụrụ, na-ekwughachi isiokwu nke omenaala na ejiji nwayọ. Ndị ahịa na-achọsi ike.
Crafts & Fibers: Site n'iji akwa ngwaahịa dị ugbu a, ihe na ihe ndị nwere mmekọrịta gburugburu ebe obibi iji nye egwuregwu na mkpali ọhụụ, ịkwa akwa, ịkwa akwa, ịkwa akwa na ụdị ọrụ ndị ọzọ iji mepụta ọhụụ ọhụụ na ịlaghachi aka.
Ngwa aro: Ngwaahịa a dabara adaba iji mepụta ngwa ọrụ aka, akpa, akwa na ngwaahịa ụlọ.
Isi echiche: Dị ka nyocha, 73% nke uwe na ụwa na-ejedebe na mkpofu ahịhịa, ihe na-erughị 15% na-emegharị ya na 1% eji akwa ọhụrụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji igwe eji arụ ọrụ, jiri agba dị iche iche, gbanye ya na eriri na-amaghị nwoke ma gbanye ya n'ime yarn ọhụrụ. E nwekwara akụkụ dị nta nke usoro ntụgharị kemịkal nke owu iji nyere ya aka ịghọta okirikiri. Nke a nwere ike belata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ịkọ nwanyị na-amaghị nwoke, na-ebelata oke ohia, mkpofu mmiri na mmepụta carbon dioxide.
Usoro & Fiber: Usoro nyocha na ntughari nke recycled nwere ike imegharị ọtụtụ mkpofu ahihia sitere na ụdị ndị ahịa na ndị na-ere ahịa, site na ntuziaka na nhazi laser, ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe eji eji akwa yarn.
Ndụmọdụ ntinye: Ighagharị nwere ikike ịbawanye na obere oge, yana akara ngosi textile na-akwado traceability na imegharị ihe. Ngwaahịa dị mma maka ịkpa akwa, sweta, denim na ụdị ndị ọzọ.